ढिडो र गुन्द्रुकः लेकको खान्की, शहरका ब्रान्ड – Samachar Pati
तिख्खर स्वादको गुन्द्रुक, नरम ढिडो र टिमुर-गोलभेडाको अचार । अथवा तपाईं यसमा लोकल कुकुराको झोल पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ । थोरै साग । त्यसमाथि दही भए त गजब
शहरमा सौखको खान्की:- शहरमा चाहि ढिडो सौखिनहरुले खाने खान्की हो । कुनै दिन स्वाद फेर्नुपरेमा धेरैले आफ्नो भान्सामा ढिडो मस्काउन थाल्छन् । ढिडोको लागि कोदोको पिठो भए हुन्छ, मकैको पिठो भए हुन्छ, फापरको पिठो भए हुन्छ । अर्थात विकल्प धेरै छन् । पकाउन उत्तिकै सजिलो । सजिलो मात्र कहाँ हो र ? स्वादिलो पनि ।
सीमापारी ढिडो र गुन्द्रुक:- ढिडो र गुन्द्रुक शहरको छुटै ब्रान्ड हो । त्यसो त यो परिकार नेपाली समुदायले सात समुन्द्रपारी पनि पुर्‍याएका छन् । विदेशका नेपाली रेष्टुरेन्टहरुले समेत सगर्व ढिडो र गुन्द्रुक पस्किरहेका छन् । जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँको चुल्होमा ढिडो र गुन्द्रुक त पाकेकै छ । अझ भनौं, ढिलो र गुन्द्रुकमा नेपालीले आफ्नोपनको स्वाद पाउँछन् । आफ्नो माटोको मिठास पाउँछन् ।
कति स्वस्थ्यवर्द्धक ?:- ढिडो र गुन्द्रुकमा हामी आफ्नो स्वाद भेट्छौ । किनभने यो हाम्रा पूर्खाहरुले तयार गरेको थाली हो । अतः यो थाली कति सन्तुलित एवं पौष्टिक छ त ? ढिडो र गुन्द्रुक कति स्वस्थ्यवर्द्धक खान्की हो ?
मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने तरिका ! हेर्नुहोस कसरी प्रभावित पार्ने आफुतिर
विहान उठ्ने वित्तिकै यस्ता चिज देखियो भने दिन शुभ हुन्छ